कोकाकोलाको १३३ वर्ष « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
कोकाकोलाको १३३ वर्ष
काठमाडौं । बुधबार कोकाकोलाको १३३ औं वार्षिकोत्सव, जसको इतिहास ८ मई, १८८६ मा शुरु भएको थियो, जतिबेला एटलान्टाका फार्मासिस्ट डा. जोन एस पेम्बर्टनको उत्सुकता र नेतृत्वमा हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गरेका थिए । यो पेय पदार्थले विश्वभरका मानिसहरुलाई त्यसबेलादेखि रिफ्रेस र उत्साहित गर्दै आएको छ । र यो पेय पदार्थले मानिसहरुको जीवनको एक निरन्तर भागको रुपमा दैनिक हरेक क्षणलाईमाथि उकास्दै र ताजा बनाउँदै आएको छ ।
फ्रान्क एम. रोबिन्सनलाई कोका–कोला नामका साथसाथै यसको ट्रेडमार्कको डिजाइन, खास लिपिको सिर्जना गरेको श्रेय जान्छ, जून आजसम्म प्रयोग भईरहेको छ ।रोबिन्सन डा. पेम्बर्टनका सहकर्मी तथा लेखानियन्त्रक थिए । जतिबेला, डा. पेम्बर्टन जसले यो पेय पदार्थको उत्पादन गरे, सोहि बेला श्री एस जी. क्याण्डलर, जसले व्यवसायलाई बिस्तार गर्दै संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाभर फैलाए । कोका–कोलाले नेपालमा सन् १९७९ देखि नै हरेक अवसरका लागि कयौं ब्राण्डको श्रृंखलाका साथमा रिफ्रेस गराउँदै आएको छः जून स्थानिय
स्वाद र संस्कृती प्रतिको लगावमा समाहित छ । कम्पनीको शुरुवातीदेखि नै, कोका–कोलाले फुटबल, संगीत तथा खानाका अनेकौं गतिबिधीहरुलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको छ । कोका–कोलाले नेपालमा उपभोक्ताहरुका लागि आविस्कारिक सोचहरुलाई अगाडि बढाई अद्धितीय पहुँच तथा अवसर सिर्जना गर्दैै आएको छ । सन् २०१३ मा कोका–कोलाले फिफा र एन्फाको सहकार्यमा फिफा विश्वकप ट्रफी नेपालमा ल्याएको थियो, जून नेपालमा पहिलो पटक वास्तविक सुनौलो ट्रफी प्रत्यक्ष रुपमा फुटबल प्रेमीहरुले हेर्न पाएका थिए ।
कोका–कोला मोःमोत्सवमा, कोका–कोलाले ग्राहकहरुको मनपर्ने कोक र मोःमोको कम्बिनेसनको आनन्द लिएका थिए, जहाँ उनीहरुको मनपर्ने सेलेब्रेटीहरु तथा राष्ट्रिय फुटबल टीमका खेलाडीहरु सहभागी थिए । यस विशेष दिनको अवसरमा, कोका–कोला नेपाल टीम आफ्ना अमूल्य ग्राहकहरुलाई उनीहरुको वर्षौसम्मको सहकार्यको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
२०७६ बैशाख २६ गते प्रकाशित